ရထားဖြင့်ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ရထားဖြင့်ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက်များ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/07/2020)
ရထားအားဖြင့်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်များသငျသညျဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးမြို့တတစ်ခုခရီးစဉ်နှင့်အတူခရစ္စမတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်သို့အရကူညီပေးသည်. မီးရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်း အစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအရှိဆုံးမှော်အောင်! များသော ဘူတာ မြို့လယ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိသည်, ရထားဖြင့်သင့်ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းခရီးသွားလာရာတွင်. သငျသညျမိသားစုများအတွက်လက်ဆောင်များများအတွက်စျေးဝယ်ရန်သွားကြသည်ရှိမရှိ, အဆိုပါအမြည်း စပျစ်ရည်ကိုပေးရမယ် သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ချစ်ရသူနှင့်အတူခရစ္စမတ်လေထုခံစားရန်, သင်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောရှိသည်ဖို့သေချာ အားလပ်ရက်များ. ကျနော်တို့၏အနည်းငယ်ပြုစုခဲ့ကြ ရထားဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်စျေးကွက် သငျသညျလက်လွတ်ချင်မည်မဟုတ်ကြောင်း.
အီတလီသို့သွားရောက်ယခုနှစ်အရှိဆုံးမှော်ကြိမ်တစ်ခုမှာခရစ္စမတ်အချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်. Florence မှရထားကို ယူ. ရှေးဟောင်းအထိမ်းအမှတခရစ်စမတ်မီးလုံးအတူတက် lit မြင်အာကာသကောင်းကင်၌ roasting သစ်အယ်သီးအနံ့.
Florence ရထားမှ Naples
တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာစျေးကွက်မှ Florence မှာအလည်အပတ်ခရီး Florence မှာ Piazza စန်တာ Croce ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတော်တော်လေးသစ်သားတင်းကုပ်နှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ဦးရိုးရာဂျာမန်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်လူသိများသည်. Piazza စန်တာ Croce ထူးခြားသောအမှတ်တရလက်ဆောင်များကောက်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာအရပ်သည်နှင့် ဒေသခံခဲဘွယ်စားဘွယ်.
မာကုရထားဖွငျ့ဤခရစ္စမတ်စျေးကွက်၏အချုပ်အခြာလန်ဒန်ရထားခရီးအတူ. လန်ဒန်နိုဝင်ဘာကနေဇန်နဝါရီဖို့ခရစ္စမတ်ရူ့နှင့်ပြည့်ဝ၏. လန်ဒန်ရဲ့သွားရောက်လည်ပတ် Hyde Park မှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Wonderland နှင့်နတ်သမီးပုံပြင်အလင်းအိမ်တွေနဲ့အလှဆင်သစ်ပင်များကိုတွေ့မြင်, ကြီးမားသော ပြင်ပနှင်းလျှောစီး ကိတ်ကွင်း, တစ်ကူးတို့ဘီး, Carol အဆိုတော်တွေနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးစျေးကွက်အတွင်း. လန်ဒန်ရဲ့အမျိုးသားသမိုင်းတစ်ဝှမ်းမှရှေးခယျြဖို့အများကြီးသေးငယ်စျေးကွက်ရှိပါတယ် ပြတိုက် သင်အတွက်နွေးထွေးသောစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် ပြတ်သားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ glühweinတစ်ဖန်နှင့်အချို့သောပွဲလမ်းသဘင်အစားအသောက်နှင့်အတူလေကြောင်းရန်. Plus အား, စိတ်ကူးနှင့်အတူ ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်း လန်ဒန်, သငျသညျရပါလိမ့်မယ် အခြို့သောအပိုငွေစု ပိုပြီးစျေးဝယ်များအတွက်!
ရထားဝိဇ္ဇာအတတ်အားခရစ်စမတ်စျေးကွက်မှခရီးသွားခြင်း!! ဘာလင်အားဖြင့်အလွယ်တကူဖြစ်ပါသည် ဥရောပ၌ရထား အရာကစေသည် ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီး. ဂျာမန်မြို့တော်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ, အဖြစ်ကသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားခရစ္စမတ်စျေးကွက်, အကောင်းဆုံးကိုရာသီအလိုက်နှင့်အတူ စျေးဝယ်, ဖြစ်ရပ်များနှင့် အချက်အပြုတ်ပျော်မွေ့!
Gendarmenmarkt တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါသည်! ဤသည် setup ကိုဘာလင်ရဲ့ခရစ္စမတ်စျေးကွက်အရှိဆုံးပါတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု. ထိုကဲ့သို့သော Gingerbread အဖြစ်အချို့သောဒေသခံရယူထားသောမြည်းစမ်း, လှော်သစ်အယ်သီး, အဆုံးစွန်အဘို့စပျစ်ရည်နှင့်ဝက်အူချောင်းပေးရမယ် ဂျာမန်ခရစ္စမတ်အတွေ့အကြုံကို.
ဥရောပတစ်လွှားအချို့ပိုကြီးစျေးကွက်မှမတူဘဲ, ရထားအားဖြင့်ပရာ့ဂ်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်များကပိုပြီးစစ်မှန်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုပေးစွမ်းသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုစျေးကွက်တစ်ခုမမေ့နိုင်သောလေထုရှိပါတယ်. မိနစ်ကွာဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံကနေတောက်ပပရာ့ဂ်ရဲ့ဟောငျးမြို့စတုရန်းအပေါ်သစ်သားတဲအလှဆင်နေကြပါတယ်. ဤတွင်ဒေသခံများနှင့်ဧည့်သည်များ Stock Filler အဘို့ကိုစုသိမ်း, သစ်သားကစားစရာ, ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အဆင်တန်ဆာ, လက်လုပ်လက်ဝတ်ရတနာ, နှင့်ရနံ့ဖယောင်းတိုင်.
စျေးကွက်မှာရောင်းချခဲ့အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများ၏ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ရက်ရောဖြစ်ပါသည်. ဧည့်သည်များ barbecued ဝက်သားအဖြစ်အစဉ်အလာခကျြအစားအစာမျှော်လင့်ခြင်းငှါ, ခကျြခကျြ muffins, conkers, ဘီယာ, တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေ, ဟောငျးခကျြခကျြအစားအစာကနေနှင့်အခြားပုံမှန်အထူး. ပရာ့ဂ်အတွက်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အထူးတစ်ခုခုရှိပါသည်. အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ နှင့် Facebook က ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုမျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့.
ရထားလမ်းဖြင့်မြို့အနားယူမှုကိုခံစားပါ ပွဲလမ်းသဘင်ဗီယင်ရန်! ဗီယင်နာ လွမ်းဆွတ်မှုတစ်မြို့ဖြစ်၏နှင့် စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း နှင့်ကမ်းလှမ်း အလွန်အကောင်းဆုံး ဥရောပတိုက်တွင်ခရစ္စမတ်စျေးကွက်၏. အဆိုပါ ဘူတာရုံ ရောက်ရှိဖို့ရန်လွယ်ကူရထားများကဗီယင်နာရဲ့ခရစ္စမတ်စျေးကွက်စေသည်ဖြစ်သောမြို့လယ်ကနေတက္ကစီသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်သာမိနစ်. လူကြိုက်အများဆုံး စျေးကွက် ဒီမြို့တော်အတွက် Rathausplatz အပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာ, နှစ်ထပ်ကိန်း twinkling အလင်းအိမ်နှင့်၎င်း၏အံ့မခန်းခရစ္စမတ်သစ်ပင်အားဖြင့်ကောင်းစွာ-lit သည်အဘယ်မှာရှိ.
အရသာလာကြတယ်ကြိုးစားပါနှင့် ရိုးရာသကြားလုံး သငျသညျလက်ဆောင်နှင့်အလှဆင်ဘို့ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရန်တင်းကုပ်ကနေကြည့်ရှုအဖြစ်, လည်းညဦးတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတံပိုး ဖျော်ဖြေပွဲ အဆိုပါ Rathaus လသာဆောင်ကနေဖျော်ဖြေကြသည်, ဒီစုံလင်သောနေ့ကအဆုံးသတ်မယ့်ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ရထားဥရောပရဲ့ထူးကဲခရစ္စမတ်စျေးကွက်များထဲမှတစ်ဦးအလည်အပတ်နှင့်အတူမှတ်မိဖို့ကဒီခရစ်စမတ်တဦးတည်း Make. သင့်ရဲ့လက်မှတ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် အွန်လိုင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခ Finder ကို အသုံးပြု. နှင့်ကြိုတင်၌ကြီးသောငွေစုပါစေ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#စျေးကွက် #နှစ်သစ် #noel ခရစ္စမတ် ခရစ္စမတ်